यति महंगो किन हुन्छ पेट्रोलियम पदार्थ ? - Laltin.com
यति महंगो किन हुन्छ पेट्रोलियम पदार्थ ?
laltin tech media July 15, 2021
असार ३१, बिहिवार, २०७८ (काठमाडौं)–
गत आवमा निगमले तेल खरिद गरे बापत आइओसीलाई १ खर्ब ४५ अर्ब भुक्तानी गरेको थियो । चालू आर्थिक बर्ष ०७७/७८ मा करिब एक खर्ब ६० अर्ब भुक्तानी हुने देखिएको छ ।
आयल निगमको तथ्यांक अनुसार असार १६ गतेसम्म १ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ आइओसीलाई भुक्तानी गर्दा, सरकारलाई ९१ अर्ब २८ करोड ८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ कर बापत भुक्तानी गरेको छ । त्यसमध्ये भन्सार कर ३५ अर्ब ३३ करोड, सडक मर्मत दस्तुर बापत ५ अर्ब ५१ करोड, प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क बापत तीन अर्ब २९ करोड, पूर्वाधार कर बापत २१ अर्ब ९३ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर २४ अर्ब १९ करोड र आय कर बापत १ अर्ब रुपैयाँ बझुाएको छ ।
आयल निगमको खरिद मूल्यकै हाराहारी सरकारले पेट्रोलियम कर असुलिरहेको छ । निगमले हाल पेट्रोल प्रतिलिटर ६७.७७ रुपैयाँमा किनिरहेको छ । यो मूल्यमा सरकारले प्रतिलिटर ५६.८६ रुपैयाँ कर लिने गरेको छ । जसकारण भन्सार प्रवेश गर्दा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १२४.८६ रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यस्तै डिजेल ६७.७२ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा खरिद गरिएको छ । यसमा कर ३९.५३ रुपयाँ लिने गरिएको छ । ६२.६६ रुपैयाँमा किनिएको मट्टितेलमा सरकारले २०.१८ रुपैयाँ कर लिने गरेको छ । प्रतिलिटर ६२.४६ रुपैयाँमा किनिएको आन्तरिक हवाइ इन्धनमा १३.९९ रुपैयाँ र बाह्य हवाई इन्धनमा ६.६१ रुपैयाँ कर लिने गरिएको छ । एक हजार एक सय ७२ रुपैयाँ २६ रुपैयाँ प्रतिसिलिण्डरमा खरिद गरेको ग्यासमा २ सय ३६ रुपैयाँ ९१ पैसा कर लिने गरिएका छ ।
निगम श्रोतका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य निरन्तर वृद्धि भएकाले नेपाली बजारमा मूल्य वृद्धि गर्दा समेत निगमलाई घाटा भएको छ । अन्तराष्ट्रिय मुल्य बढ्नु तथा उच्च करको दरका कारण उपभोक्ता मुल्य आकासिएको छ।
Previous: नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बन्यो देशकै उत्कृष्ट बैंक, पायो अन्तराष्ट्रिय अवार्ड
Next: सेयर बजारबाट उठ्यो १४ अर्ब बढीको पुँजीगत लाभकर